“विद्यालय तहमा गणितको नतिजा न्यून हुनका कारणहरु”
गणित भनेको विभिन्न वस्तू घटनाहरुको संवन्ध यसको मात्राको तार्तिक अध्ययन भनि परिभाषित गर्न सकिन्छ।हुनत गणितलाई अंकहरुको विज्ञान पनि भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ।वर्तमान परिवेशमा गणित केवल अंकहरुको विज्ञान मात्र होइन यो त मानव जीवन हो।जीवनको हरेक पलसँग गणित जोडिएको छ।सरल तथा व्यवस्थीत रुपले जिउने तथा समाजमा उत्कृष्ट जीवन बिताउने यसको भूमिका रहेको हुन्छ। गणितको महत्व अपरम्पार रहेको छ।हरेक विषयको विषयगत ज्ञान… पुरा पढौ
हात्तीपाइले रोग निवारण किन ?
हात्तीपाइलो रोग मानव समाजमा धेरै पुरानो रोग हो। कुष्ठरोग जस्तै मानिसलाई शारीरिक रूपमा असक्त, असमर्थ तथा अपा· बनाउने सरुवा रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको परजीवीबाट सङ्क्रमण भएपछि लाग्दछ। असमर्थ, अपा· अवस्थामा पुगेपछि प्रभावकारी उपचारको लागि औषधि नभएको हुँदा यस रोगले व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या बढाउन र विकासमा अवरोध ल्याउन अहम् भूमिका खेलेको छ। सोझै ज्यान नलिने तर अशक्त,… पुरा पढौ
चौबाटोमा अलमलिएका नेपाली
'चौबाटो’ अक्सर हामीले भोग्दै र भन्दै आएको शब्द हो। अङ्ग्रेजीमा यस परिभाषिक शब्दलाई 'क्रस रोड’ ९ऋचयकक च्यबम० भनिन्छ। प्रायः सबै पश्चिमाहरुले मान्दै आएका परम प्रभु 'यशुु लाई संकेतबाट चिनिने एउटा रेखाचित्र पनि () क्रस। इसामशीलाई त्यत्तिबेलाका पादरी पण्डित र शासकले उनका सत्यवाणीबाट भयभित भएर अर्थात यशुका शिक्षाबाट उनीहरुले धर्मका नाउँमा गर्दै आएको शोषण, अन्याय-अत्याचारको भण्डाफोर हुने देखेर झुठा मुद्दा लगाई… पुरा पढौ
क्यान्सर रोग निवारणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका
अर्वुद (क्यान्सर) रोग आज संसारभरीमा दिनहुँ बद्दो स्वास्थ समस्याको रुपमा देखा पर्न थालेको छ। मानिसको बद्दै गएको औसत आयु, बद्दो शहरीकरण एवं औद्योगिकरण तथा खाद्य परिकार र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन नै यो रोग फैलिनुको मुख्य कारणको रुपमा रहेको देखिन्छ। अर्वुद रोग शरीरको कोष या कोषिकाहरुको समूहको अस्वाभाविक वृद्धि हो। यदि यसलाई समयमा नै नष्ट गरिएन वा हटाइएन भने, शरीर भरी… पुरा पढौ
पोखरादेखि पर्यटकीय गाउँ चित्रेसम्म
मङ्सिर महिनाको समय, अनुकूल समय। न चिसो, न गर्मी। पोखरादेखि पर्वतको चित्रेसम्मको यात्रा थियो हाम्रो। कास्की, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाको नौ वटा गाविसअन्तर्गत पर्ने पञ्चासे क्षेत्र आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन पनि बढ्दो छ। पञ्चासेको पेरिफेरीमा भने १७ वटा गाविस पर्दछन्। पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम (इबीए) का प्रतिनिधिसँगको यात्रा कुराकानी गर्दै जाँदा बाटो कटेको पत्तै भएन। नेपालमै पहिलो पटक… पुरा पढौ
शिक्षाका ज्योति : रामचन्द्र सुवेदी
मुसुक्क हाँसी बोलने बानी दार्शनिक स्वरूप हे काल तैले क्यान्सर बनी चुडालिस् त्यो रूप। टपक्क टिपी किन हो? लगिस् रामचन्द्र बाबालाई हजारौं जनता रोएको रोयै टुहुरा बनाई।। यो सुन्दर पृथ्वीमा थुप्रै मानिस जन्मिएर मानव मानवको ज·ल बनेर भरिएको छ। विश्वमा आज करिब सात अर्बको हाराहारीमा मानिस जन्मिसकेको कुरा तथ्याड्ढले देखाउन खोजेको छ। ती सबै मानिस असल मात्र जन्मेका भए सायद… पुरा पढौ
विगतका सहमति र संविधान निर्माण
२०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०६५ साल जेष्ठ १५ गतेबाट २ वर्ष भित्रै संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने संबैधानिक प्रावधान राखिएको थियो तर चार वर्षसम्म पनि संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन। चार वर्षसम्म संविधानको अन्तरवस्तु र प्रकृयाको वारेमा व्यापक वहस् र छलफल भए। संविधानमा समावेश गर्ने विषयहरूलाई १० ओटा विषयगत समिति र एउटा संबैधानिक समितिको… पुरा पढौ
मोक्षधाम सेवा आश्रम र विश्वजागरण महामहोत्सव
"परिवर्तिन संसारे मृतकोवानजायते सःयाती यनः जातेन याति वंश समुन्नतिम्" अर्थात परिवर्तनशील संसारमा जन्मपछि मृत्यु अवश्य नै छ तर जसले आफ्नो वंश, समाज र समग्र राष्ट्रका उन्नतिका लागि सुकर्म गर्छ ऊ मरेर पनि अमर रहन्छ। जीवन जीउनका लागि मात्र मानव यस तप भूमिमा जन्मेको होइन भन्ने यथार्थता सिक्न र सिकाउन मोक्षधाम सेवा आश्रमको परिकल्पना र स्थापना भइ सकेको छ। आज हाम्रो… पुरा पढौ
बन्द, हड्ताल र चक्काजाम किन ?
विकसित देशहरूमा बन्द, हड्ताल, चक्काजामजस्ता कार्यहरू गर्न सरकारले मनाही गरेको छ। तर कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैं हाम्रो देशमा त प्रायःजसो एकथोक न एकथोक भइरहन्छ। कहिले बन्द, कहिले चक्काजाम त कहिले नारा जुलुसजस्तो क्रियाकलापहरू भइरहन्छन्। खाली नै हुँदैन। विकसित देशहरूमा गोष्ठी, सेमिनार हुन्छ तर यहाँ त्यसको अलावा यस्ता प्रवृत्तिका कार्यहरूको सट्टा विपरीत र नराम्रा, जनताहरूलाई मर्का पर्ने खालका क्रियाकलापहरू गरिन्छ।… पुरा पढौ
सडक बालबालिका एक सरोकारको विषय
बालबालिका को हुन् वा कुन उमेरसम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गर्ने भन्ने बारेमा कुनै कार्य आधार छैन। प्रत्येक राज्यको कानुनले परिभाषित गरे अनुसार बालबालिकाको उमेर फरक-फरक पाइन्छ। बालबालिका भनेका जन्मेदेखि १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्मका व्यक्ति हुन्। बालबालिकाहरू शारीरिक एवम् मानसिक रूपमा परिपक्व नहुने हुँदा उनीहरूलाई विशेष हेरचाह र सुविधाहरूको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ। बाँच्नका लागि चाहिने… पुरा पढौ